Faka ingxelo entsha ye-GIMP 2.10 kwi-Ubuntu 18.04 LTS | Ubunlog
Mva nje abafana abaphethe uphuhliso lwe-GIMP babhengeze ingxelo entsha ezinzileyo yale software intle, kuba esisicelo sokuhlela simahla kunye nomthombo ovulekileyo GIMP inokukhutshwa ngokutsha kwe-GIMP 2.10 Ukufika kwiminyaka emithandathu emva kwenguqu yokugqibela enkulu engu-2.8.
Ayizukubaxana ukuba ndithe I-GIMP ngowona mhleli wemifanekiso uthandwa kakhulu kwihlabathi leLinux kwaye mhlawumbi yeyona ilungileyo yeAdobe Photoshop, kuba emva kweminyaka emininzi yophuhliso ifumene ukwamkelwa okukhulu luluntu lwaseLinuxera.
Ngale nto, ikwazile ukuzibeka kwenye yezicelo zokuhlela umfanekiso ezinokufumaneka phantse kuzo zonke iindawo zokugcina iiLinux.
Nangona ihlaziyiwe kwinguqulelo entsha, i-GIMP iya kuqhubeka nokusebenzisa amathala eencwadi e-GTK2. I-GTK3 kulindeleke ukuba isetyenziselwe i-GIMP 3.x, eya kuza ngexesha elahlukileyo.
1 Yintoni entsha kuhlobo olutsha lwe-GIMP 2.10?
2 Uyifaka njani i-GIMP 2.10 kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Yintoni entsha kuhlobo olutsha lwe-GIMP 2.10?
I-GIMP 2.10 ifakwe kwi-injini yokuqhutywa kwemifanekiso ye-GEGL kwaye lolona tshintsho lukhulu kule nguqulo. Yazisa ngezixhobo ezitsha kunye nezixhasi.
Abanye ezona zinto ziphambili zikhutshiweyo zezi:
Kongezwa imixholo emitsha
Inkxaso esisiseko ye-HiDPI
I-GEGL yinjini entsha yokuqhubekeka nomfanekiso obonelela ngokuqhubekeka kobunzulu obuphezulu, ukuqhubekeka okufundwayo kunye nokulungiswa kwepikseli ngokukhawuleza
La Inguquko yeWarp, utshintsho olumanyeneyo kunye nezixhobo zokubamba eziguqukayo zezinye zezixhobo ezitsha
Zininzi izixhobo ezikhoyo eziye zaphuculwa
Umzobo wedijithali uphuculwe ngokujikeleza kwe-canvas kunye neflip, ukupeyinta ulingano, inkxaso yebrashi ye-MyPaint
Inkxaso ye-OpenEXR, i-RGBE, i-WebP, iifomati zemifanekiso ye-HGT ziye zongezwa
Ukujonga kunye nokuhlela imethadatha ye-Exif, XMP, IPTC, kunye ne-DICOM
Ulawulo lwemibala ehlaziyiweyo
Umbala wokuhamba kwendawo yokuhamba kombala
Ukuphuculwa kweefoto zedijithali ngokuBhengeza, iZithunzi-eziPhambili, ukuPasa okuphezulu, ukubola kweWavelet, izixhobo zokuqikelela zePanorama
Uyifaka njani i-GIMP 2.10 kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
Njengoko sele kutshiwo, i-GIMP ifunyenwe koovimba phantse kuzo zonke izinto ezihanjiswa yiLinux kwaye i-Ubuntu ayisiyonto ikhethekileyo, kodwa kuba iinguqulelo ezintsha zezicelo azihlali zihlaziywa ngokukhawuleza, ngeli xesha siza kufumana ingxelo yangaphambili kwi-Ubuntu oovimba.
Kodwa ungakhathazeki, sinenye indlela yokonwabela le nguqulo intsha. Siza kuxhasana ngoncedo lwePlppak.
Imfuno yokuqala yokufaka i-GIMP kwi-Flatpak yile Inkqubo yakho inenkxaso yoku, Ukuba akunjalo Ndabelana ngendlela yokuyongeza.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukongeza iPappak kwinkqubo, yoku Kufuneka songeze le migca ilandelayo kwimithombo yethu yolwazi
Singakwenza oku ngomhleli wethu owuthandayo, umzekelo, nano:
Kwaye siyazongeza ekugqibeleni.
Okanye singayongeza ngalo myalelo ulula:
Y ekugqibeleni sifakelwe kunye:
Kuya kufuneka sikhumbule ukuba ngoku kwi-Ubuntu 18.04 LTS inyathelo lokuhlaziya elifanelekileyo lasuswa, kuphela xa songeza iifosti.
Seyifakelwe iPappak kwinkqubo yethu, ngoku ukuba singayifaka i-GIMP kwi-Flatpak, senza oku ngokwenza lo mthetho ulandelayo:
Xa sele ifakiwe, ukuba awuyiboni kwimenyu, ungayiqhuba usebenzisa lo myalelo ulandelayo:
Ngoku Ukuba awufuni ukufaka i-GIMP 2.10 ngeFlppak, kukho enye indlela yokufaka kwaye oku kukukhuphela ikhowudi yemvelaphi yesicelo kwaye uyiqokelele ngokwakho. Ngale nto kufuneka siyikhuphele kwikhonkco elilandelayo.
Ukuba awukhethi nayiphi na kwezi ndlela, kuya kufuneka ulinde i-GIMP ukuba ihlaziywe ngaphakathi koovimba ukuze ukwazi ukuyifaka kwi-Ubuntu Software Centre.
Kuhleli kuphela ukuqala ukonwabela olu hlobo lutsha lwe-GIMP kwindawo yethu entsha Ubuntu 18.04.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » Faka ingxelo entsha ye-GIMP 2.10 kwi-Ubuntu 18.04 LTS
UmKristu B. sitsho
Akukho PPA? Phambi kokuba ndihlale ndibeka iPPA kwaye ndifake isicelo
Phendula Cristian B
Awunakho ukhetho lokucima ngokuzenzekelayo njengeFotohop? : - /
njengoko ndisenza njalo ndingayisebenzisa kwimenyu kwaye hayi ukusuka kwisiphelo sendlela njengangoku
Molo, kukho impazamo kwi-ppa kunye ne-Flatpak install command, ayinamsebenzi:
i-sudo add-apt-repository ppa: alexlarsson / flatpak
I-sudo ifake i-flatpak